रोजगारी - साप्ताहिक
युवराज गौतम, फाल्गुन १५, २०७५
कार्य व्यस्तताका कारण नियमित कलेज वा विश्वविद्यालयको कक्षामा सहभागी हुन नपाएका, ग्रामीण क्षेत्र वा विदेशमा बसोबास भएका, बीचमै पढाइ छुटेका, आफूमा प्रतिभा, क्षमता एवं अनुभव भएर पनि कलेजको शिक्षा लिन नसकेकाहरूका निम्ति खुला विश्वविद्यालय सजिलो माध्यम बन्न पुगेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
कतारमा वैदेशिक रोजगारी
नरेन्द्र रौले, माघ २१, २०७५
कामको खोजीमा कतार जाने नेपालीहरूले अनेकौं समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । कामदारहरूलाई ति समस्याबाट छुट्कारा दिलाउन कतार सरकार आफैंले म्यानपावर कम्पनी गठन गरेको छ । उक्त कम्पनी कतारका उद्योग तथा व्यापारमन्त्री अली विन अहमद अल कुवारीको निर्णयमा गएको पुस १८ देखि सञ्चालनमा आएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
सरकारी जागिरको मोह
युवराज गौतम, माघ १, २०७५
देश संघीयतामा गैसकेर प्रदेश तथा स्थानीय सरकार बनिसकेपछि सरकारी सेवामा प्रशस्त अवसर खुलिरहेका छन् । सरकारी जागिरप्रतिको मोह र त्यसमा भविष्य देख्ने निर्मल, प्रकाश र ईश्वरजस्ता हजारौं युवा यतिबेला लोकसेवा परीक्षाको तयारी गरिरहेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
जापानमा रोजगारी : कडा परिश्रम, राम्रो आम्दानी
युवराज गौतम, पुस २४, २०७५
कमाउन त यहाँ आएका नेपालीले न्यूनतम १ लाखदेखि २ लाख २० हजारसम्म कमाउँछन् तर परिश्रम धेरै गर्नुपर्छ । आफू जुन पेसामा आबद्ध हुने हो त्यो कुरा नेपालमै निर्णय गरेर आउँदा राम्रो हुन्छ, अन्यथा यहाँ आएर अलमलमा परिन्छ र धेरै दु:ख पाइन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
बढ्दै कफी कल्चर
नरेन्द्र रौले, फाल्गुन १०, २०७४
नेपालमा १७ ठाउँमा क्याफे खोलेको हिमालयन जाभाले विदेशमा क्यानाडा, बेलायत, ल्हासा, दोहा, मलेसिया, अस्ट्रेलिया तथा भुटानको पारो विमानस्थलमा आफ्ना ब्रान्च फैलाइसकेको छ । अमेरिकाको नेब्रास्का तथा मिनिसोट्टामा फ्रेन्चाइज खोल्ने तयारी भैरहेको छ । अझै विभिन्न ठाउँबाट ब्रान्च खोल्न प्रस्ताव आइरहेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
नेपालका उत्कृष्ट जब्स
साप्ताहिक संवाददाता , कार्तिक ७, २०७४
नेपाल आर्थिक विकासतर्फ लम्किरहेको विकासोन्मुख देश हो । अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरूझैं बेरोजगारी नेपालको समेत प्रमुख समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ । राम्रा अवसरहरूको खोजीमा ठूलो संख्यामा युवा शक्ति विदेश पलायन भैरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू हुँदै नभएका भने होइनन् । पुरा पढ्नुहोस्
सुरु भयो आगामी वर्षको लाहुरे यात्रा
भिषा काफ्ले, आश्विन २३, २०७४
तालिम पूरा भएपछि २ लाख रुपैयाँदेखि विभिन्न देशको मिसन हेरी प्रतिमहिना ५ लाख रुपैयाँसम्म कमाइ हुन्छ । भर्ती भएको १५ वर्षपछि स्वेच्छिक अवकाश लिन सकिन्छ भने निश्चित अवधिसम्म पनि काम गर्न पाइन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
बिमा अभिकर्ता कसरी बन्ने ?
साप्ताहिक संवाददाता , आश्विन १९, २०७४
बिमा अभिकर्ता बन्न बिमा समितिबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट बिमा व्यवसायसम्बन्धी तालिम लिएको प्रमाणपत्र आवश्यक हुन्छ । यस्तो तालिम लिन एसएलसी वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
कसरी बन्ने फूल व्यवसायी
साप्ताहिक संवाददाता , आश्विन १७, २०७४
करोडौँ रुपैयाँका फूल विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । नेपालमा अहिले १ सय ४१ हेक्टर क्षेत्रफलमा फूल खेती हुन्छ । फूल खेती तथा व्यवसायमा ४१ हजारभन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा आश्रित छन् । पुरा पढ्नुहोस्
प्रहरी सेवा : जवानदेखि निरीक्षकसम्म अवसर
साप्ताहिक संवाददाता , भाद्र १०, २०७४
नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरीले पनि प्रहरी जवान र परिचर पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । २ हजार ३ सय युवालाई सशस्त्र प्रहरी जवानतर्फ आवेदन खोलिएको छ भने २ सय परिचरतर्फ दरखास्त आह्वान गरिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
कसरी बन्ने सैनिक अधिकृत ?
भिषा काफ्ले, श्रावण ३१, २०७४
सैनिक अधिकारीका रूपमा प्रवेश पाउनेहरूमध्ये लोकसेवा उत्तीर्ण गरिसकेपछि सेनाले लिने परीक्षामा पुरुषभन्दा महिलाले बढी सफलता प्राप्त गरेका छन् । प्रत्येक पटकको परीक्षामा पुरुष १० देखि १५ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण हुन्छन् भने महिला ४० प्रतिशतसम्म उत्तीर्ण भएको पाइन्छ । पुरा पढ्नुहोस्